Mitambo, 07 Gunyana 2019
Mugovera 7 Gunyana 2019
Gunyana 02, 2019
Dynamos Yotatsurana neHighlanders muChibuku Super Cup
Chikwata cheDynamos chatambidzwa Highlanders mumakundano eChibuku Super Cup.
Nyamavhuvhu 29, 2019
Saul Chaminuka Orairidza Chikwata chekuBotswana
Aimbove mutevedzeri wemurairidzi wechikwata chenyika chemaWarriors, Saul Chaminuka, ndiye ava murairidzi wechikwata chenhabvu cheTAFIC Sporting Club, icho chichangopinda mu muBotswana Telecommunications Corporation Premiership.
Nyamavhuvhu 28, 2019
Muimbi Mbeu Oburitsa Dambarefu Idzva neChishanu
Muchikamu chedu chemumhanzi nhasi tirikutarisa nezvedambarefu idzva riri kuburitswa nemusi weChishanu nemuimbi weAfro-Fusion Ashton Mbeu Nyahora rinonzi Mhodzi Diaries 1.
Joey Antipas - Anokodzera Here Kuva Murairidzi weZimbabwe Warriors?
Kunyange hazvo vakawanda vari kuti Antipas ndiye aifanira kupihwa basa iri, kune vamwewo vane mamwe mafungiro vachiti ivo kune varairidzi vakawanda vaikwanisa kubata basa iri nemazvo kusanganisira Bruce Grobbelaar uyo akaita mukurumbira achitambira Liverpool yekuEngland.
Mitambo yeCLPSL Yotsiridza Chicken Inn neBlack Rhinos Dzichitarisa Kuva Pamusoro
Zvikwata zveChicken Inn ne Black Rhinos zvakatarisana nemukana mukuru wekuenda pamusoro petafura mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League.
Munyori Aive neMukurumbira, VaStephen Chifunyise, Vanoradzikwa muHarare
Munyori aive nemukumbira munyaya dzemitambo, VaStephen Chifunyisa, varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare zvichitevera kushaya kwavo nemusi weMuvhuro mushure mekunetseka nechirwere chegomarara.
Nyamavhuvhu 06, 2019
Nyika Inorangarira Nyanzvi Mune zveMitambo, Tsika neDzidzo, VaChipfunyise
VaChipfunyise, avo vanga vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa, vakashaya mushure mekunetseka negomarara kwemakore akawanda.
Chikunguru 27, 2019
Vakawanda Votaura Pamusoro peChikwata cheZimbabwe Netball
Chikwata chenyika chemutambo weNetball chemaGems chakadzoka kumusha chichibva kumakwikwi e 2019 Vitality World Cup chiine zvidzidzo zvakawanda kuhurumende pamwe nekuvateveri vemitambo munyika.
Chikunguru 22, 2019
MaGems Otendwa neKusimudza Mureza weNyika
Chikwata cheZimbabwe chemaGems nhasi chapedza rwendo rwacho rweNetball 2019 Vitality World Cup chiri pachinhanho chechisere. New Zealand yakakunda Australia 52- kwa 51 ichibva yasimudza mukombe uyu.
Chikunguru 19, 2019
Dynamos Yokweshana neCaps United neSvondo
Mutambo uyu wauya panguva iyo Dynamos yave nemurairidzi mutsva, Tonderai Ndiraya, uyo akatsiva Lloyd Chigove asi Caps United ichiri naLloyd Chitembwe, uyo aivepo apo Dynamos yairairidwa naLloyd Mutasa mwaka wapera.
Chikwata cheBhora reMaoko, chemaGems, Chinobudirira Mushure Mekurova Northern Ireland
Chikwata cheZimbabwe chemaGems chanyora imwe peji munhoroondo yemitambo muZimbabwe mushure mekusvika munharaunda yechipiri mumakundano eVitality Netball World Cup 2019.